China Anchoring mwekota na eze APA Series rụpụta na Factory | MGBE
Anchoring mwekota na ezé APA Series
Nkọwa nke ngwụcha ngwụcha ngwụcha maka eriri USB CROP bụ ndị nrụpụta nrụgide ọkachamara na ndị na-eweta ya. Nwụrụ anwụ ọgwụgwụ mwekota maka ab cable ọrụ l ...
Nkọwa nke ngwụcha ngwụcha ngwụcha maka eriri USB
CROP bụ ndị na-eme mkpesa na ndị na-ebubata ya.
Nwụrụ anwụ mwekota maka ab cable ọrụ line.The nwụrụ anwụ ọgwụgwụ mwekota e mere na arịlịka gwara mmanụ ọrụ e na 2 ma ọ bụ 4 na-eduzi na osisi ma ọ bụ mgbidi. The mwekota mejupụtara a ahu, wedges na mbughari na kemeghi mgbapụta ma ọ bụ mpe mpe akwa. Otu isi Anchor clamps bụ imewe iji kwado onye na-anọghị iche, wedge ahụ nwere ike ịgbanwe onwe ya. Pilot wires ma ọ bụ n'okporo ámá na-eduzi ọkụ nduzi na-ada n'akụkụ mwekota. Emepụtara oghere onwe site na njikọta ihe eji eme mmiri maka itinye onye na-eduzi ya n'ime ngwa ngwa. Ọkọlọtọ: NFC 33-042.
Ihe nke njigide njedebe
Njirimara nke njigide njedebe
N'ihi na ndị ziri ezi nwụrụ anwụ ọgwụgwụ mwekota echichi, ndị na-esonụ na-atụ aro:
Nwụrụ anwụ njedebe mwekota nkọwapụta
Dị APA-25- * APA-25 - * - 500 APA-50- * APA-50 - * - 500
Obere (daN) 700 700 1000 1000
(*) Tinye "FA" pụtara eriri igwe, tinye "SS" pụtara igwe anaghị agba nchara
Anchoring mwekota N'ihi ngwa anya eriri Gịnị type A ...
Anchoring clamps Aluminium Alloy maka ADSS / Gburugburu ...